Shina Kalitao avo lenta tsy misy rano 100% Windbreaker manify tantera-drano mitafy tànan'akanjo palitao Mountaineering Suit Fabric mpanamboatra sy mpamatsy | Wenchang
Tondra-drano avo lenta tsy misy rano 100% Windbreaker manify tantera-drano mitafy haingon-kiraro mitafy haingon-tenda fitondra miangona
Tsy misy MOQ Custom Knit Polyeste ...
Fanamainana haingana Jacquard harato ...
Voamarina ny Grs-Friendly Grs ...
RPET hatsembohana 87% polyamide 13% ...
Lycra Texture Weft ...
Malefaka namboarina polyester RPE ...
Kalitao tantera-drano 100 ...
Item No: KWS21-1021
Fitaovana ： 100% Polyester
Toetra mampiavaka: Antibacterial / High Color Fastness / Perspiration / Mitroka ny hamandoana / Haingana haingana / Mahazo aina / Miaina / Mivady haingana / Rivotra / Rivotra / Rano / Anti-UV
Ho an'ny palitao / akanjo mitaingina tendrombohitra / Windproof / akanjo fanatanjahan-tena
Vidin'ny FOB: Etazonia Arakaraka ny toe-javatra / tokontany manokana
Fandoavana: L / CT / T Western & Union
Fahaizana manome: 50000 Piece / Pieces isan'andro
Tsena: Amerika, Eoropa Afovoany Atsinanana
Antsipirian'ny fonosana: Famonosana horonana amina harona plastika na base amin'ny zavatra takinao
Kaomandy kely indrindra: Orinasa fitsapana 1KG
KATEGORIAM-pamokarana Palitao FABRIC
ITEMY NO KWS21-1021
Karazan-tsakafo Manaova famandrihana
ara-nofo Polyester 100%
sakany 73/75 p.
endri-javatra Maina haingana / Rivotra / tantera-drano / Anti-UV
Ampiasao Akanjo / Fanatanjahan-tena / Palitao / Akanjo mitaingina tendrombohitra
Tsena Etazonia / Kanada / Aostralia / UK / Alemana
Fanamarinana RSG / SGS / Oeko-tex
Toerana niandohana Sina (Tanibe)
Antsipirian'ny fonosana fonosana anaty horonana amina harona plastika
na mifototra amin'ny zavatra takinao
Pirinty vita amin'ny Patter / Custom Fanontana an-tsokosoko & fanontana nomerika ho famoronana namboarina
C0-Marika Adidas / Nike / H & M / VANS / Decathlon
Sample Service maimaim-poana
Volavola namboarina MANAMPY
FANOMPOANA ANTSIKA & tombontsoantsika Misy santionany maimaim-poana.
Volavola namboarina, sakany, lanjany.
Serivisy fampandrosoana tsara ohatra.
Ekipa mahery R&D sy Quality Control.
Drafitra famokarana 1. Mifandraisa aminay
8. mpiara-miasa maharitra
Ny fatiantoka amin'ny lamba palitao
Ny mitafy mihoatra ny 1.300 dia somary mavesatra ary tsy voadio kely
2. Mafana loatra ny hanaovana azy, ary mangatsiaka rehefa esorina, izay tsy mety amin'ny fitafiana isan'andro.
Olana mahazatra amin'ny lamba palitao:
Inona no teknolojia lamba amin'ny palitao ankapobeny
GORE-TEX koa dia manana CONDUIT, OMNI TECH, Memo-Tex, POWER-TEX, HYDRO-DRY, WEATHERTITE, sns. Ireo toetra ankapobeny ananan'ireto lamba ireto dia tsy tantera-drano sy afaka miaina, tsy lazaina intsony ny angona fampisehoana mankaleo, amin'ny fampiasana, ny fampisehoana tsy fahasamihafana lehibe
Inona no karazana lamba tsy tantera-drano sy afaka mifoka rivotra ho an'ny palitao?
Ny andraikitry ny palitao dia ny miaro ny rivotra sy ny orana, noho izany ny palitao dia tsy maintsy manana fiasan-drano. Ho fanampin'izany, Windbreaker Waterproof Windproof satria ny palitao dia natao ho an'ny fitafiana isan'andro, na dia mihaona amin'ny rano aza dia ilaina ihany koa ny rivotra. Azontsika atao ny mamaritra ny palitao toy ny: ny lamba dia tantera-drano sy mifoka rivotra, ary ny seams nopetahana.
Inona ny index tsy misy rano sy mifoka rivotra an'i Jaketa?
Ny mampiavaka an'io karazan'akanjo io dia ny firafitry ny fitaovana tsy mahazaka rano sy mifoka rivotra mifangaro amin'ny lamba fototra. Ireo fitaovana ampiasaina dia manana toetra roa miasa. Ny iray dia tsy tantera-drano, izay matetika no soloan'ny rano MM. Ny fenitry ny akora GORE-TEX dia tsanganana 20000MM rano, izay midika fa raha mametraka tsanganana rano 20M amin'ny lamba ianao dia tsy hisy fivoahan'ny rano.
Ho fanampin'ny famokarana lamba yoga, manana akanjo milomano koa izahay, pataloha amoron-dranomasina, akanjo fanatanjahan-tena, akanjo mihazakazaka, akanjo ski, lamba fanaovana tendrombohitra.
Miorina ao Jiangsu, Sina izahay, manomboka amin'ny 1995, mivarotra amin'ny tsena anatiny (60,00%), Amerika avaratra (10.00%), atsimo atsinanana
Azia (10.00%), Afrika (10.00%), Azia atsimo (5,00%), Amerika atsimo (3.00%), Eropa atsimo (2.00%). Misy totalin'ny olona 51-100 ao
2. ahoana no ahazoantsika antoka ny kalitao?
Santionany mialoha ny famokarana alohan'ny famokarana betsaka;
Fanaraha-maso farany farany alohan'ny fandefasana;
3.Inona no azonao vidiana aminay?
Lamba lamba, fanonta pirinty
4. maninona ianao no tokony hividy aminay fa tsy amin'ny mpamatsy hafa?
Vokatra 1.main: lamba fanodinana lamba, lamba fanatanjahan-tena, lamba fanatanjahan-tena 2. Oeko-tex fanamarinana mahazatra no hatolotra. 3. Color
Ny tatitra momba ny fitsapana haingana dia hatolotra hatramin'ny AATCC 3-4 kilasy 4. Ny kaonty kely dia mety accpetd 5. fitaovana fanodinana
5. inona ny serivisy azontsika omena?
Fepetra fanekena ekena: FOB, CFR, CIF, EXW, CIP, DDP, Express Express, DAF ；
Vola aloa amin'ny vola ekena: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
Karazana fandoavam-bola ekena: T / T, L / C, MoneyGram, carte de crédit, Western Union, Cash;
Fitenenana amin'ny fiteny: anglisy, sinoa, japoney, portogey!
Teo aloha: Spandex Jacquard nanjelanjelatra lamba mihosin-kofehy avo lenta ho an'ny lamba yoga
Manaraka: Volom-bolo vita amin'ny polyester malefaka RPET Pet Mesh Milky Jersey Fabric vita amin'ny tavoahangy plastika namboarina ho an'ny T-shirt fanatanjahan-tena
Lamba akanjo tendrombohitra